Burmese page3of 20 - English-Video.net
Kyra Gaunt: ကြိုးခုန်တဲ့ကြိုးက ၎င်းရဲ့ စည်းချက်ရလာပုံ။
2018-03-15 337,451 views
"ဆင်း၊ ဆင်း ကလေးရေ၊ ဆင်း၊ ဆင်း ရိုလာကိုစတာ" ဟစ်ဟော့ပ်ဂီတဟာ Double Dutch ဘုရင်မ အတော်များများကို ကျေးဇူတင်ရပါတယ်။ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများရဲ့ ဂီတလေ့လာမှုပညာရှင် Kyra Gaunt ကနေပြီး ကြိုးခုန်တဲ့ကြိုးရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ သမိုင်းရဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ကို ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။
Bob Stein: ဘဝတာနှောင်းပိုင်းအတွက် ဘဝမှတ်တိုင်။
2017-11-28 1,143,737 views
ကျွန်တော်တို့ဟာ မွေးနေ့ပွဲတွေ၊ ဘွဲယူတာတွေလို ကျွန်တော်တို့ ဘဝရဲ့ အစောပိုင်းအဆင့်တွေကို အမှတ်အသားပြုဖို့ရာ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို အသုံးပြုကြပေမဲ့ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေကျတော့ရော။ ရှေပြန်၊နောက်ပြန် နှစ်ခုစလုံးကို သုံးသပ်လျက် အလေးအနက် ဆင်ခြင်ထားတဲ့ ဒီဟောပြောချက်ထဲမှာ Bob Stein ကနေပြီး သင်အိုမင်းလာတာနဲ့အမျှ လက်ရှိရောက်နေတဲ့ သင့်ဘဝကို ပြနဆင်ခြင်ဖို့၊ နောက်လာမယ့် ဘယ်အရာကိုမဆို တံခါးဖွင့်ပေးဖို့ သင့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို ပေးပစ်ခြင်း( ဒီအရတွေနောက်က ဇာတ်လမ်းတွေကို မျှဝေခြင်း)ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာသစ်တစ်ရပ်ကို တင်ပြထားပါတယ်။
Amishi Jha: ပျံ့လွင့်နေတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်နည်း။
2017-03-17 2,130,926 views
Amishi Jha ဟာ ကျွန်တော်တို့တွေ အာရုံစိုက်ပုံအကြောင်းကို လေ့လာပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်ရဲ့ အတောမသတ်တဲ့ စီးကြောင်းကနေ လက်ခံရရှိတဲ့ထဲမှာ အရေးကြီးတာက ဘာလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်ကနေ ဆုံးဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါ။ ( စိတ်ဖိစီးမှုလို) အပြင်ဘက် အာရုံအနှောင့်အယှက်နဲ့ (စိတ်ပျံ့လွင့်ခြင်းလို) အတွင်းဘက် အာရုံအနှောင့်အယှက် နှစခုစလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာရုံစိုက်မှု စွမ်းအားကို ယုတ်လျော့စေတယ်လို့ Jha ကဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိုပြီး ရိုးစင်းတဲ့ နည်းစနစ်တစ်ချို့ကတော့ ဒါကို တိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။ "ကိုယ့်အာရုံစိုက်မှုကို အာရုံစိုက်ပါ" လို့ Jha က ဆိုထားပါတယ်။
Adong Judith: နားလည်မှုလွဲမှားမှုကို ပေါင်းကူးပေးရန် အနုပညာကို အသုံးပြုပုံ။
2017-08-27 934,386 views
ဒါရိုက်တာနဲ့ ပြဇာတ်ရေးဆရာမက Adong Judith ဟာ LGBTQ ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်များမှအစ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအဆုံး ပြဿနာမျိုးစုံ ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဆွပေးရေး အနုပညာများကို ဖန်တီးပေးသူပါ။ တိုတောင်းလှပေမဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ဒီဟောပြောခန်းမှာ၊ TED အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သူမဟာ သူမရဲ့ လက်ရာတွေ ၊"တိတ်နေကြတဲ့ အသံများ" ပြဇာတ် အပါအဝင်၊ အကြောင်းကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၎င်းဟာဆိုရင် Joseph Kony ရဲ့သူပုန်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့ စစ်ပွဲမှာ မြောက်ပိုင်း ယုဂန်ဒါသားတွေရဲ့ ဓားစာခံတွေကို နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောချက်အတွက် အတူ စုစည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ "အချင်းချင်းကို နားထောင်ခြင်းဟာ ပြဿနာအားလုံးကို အံ့သြဖွယ် ဖြေရှင်းမှာတင်မက လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများစွာကိုပါ အတူတကွ ဖြေရှင်းဖို့ စတင်လုပ်ဆောင်ရန် လမ်းမများကို ဖန်တီးဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ပေးပါလိမ့်မယ်" လို့ သူမက ဆိုထားပါတယ်။
Alvin Irby: ကလေးတိုင်းကို ရာသက်ပန် စာဖတ်သူတစ်ဦးဖြစ်အောင် စေ့ဆော်ပေးပုံ။
2017-11-28 1,232,865 views
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပညာရေးဌာနအရ လူမည်း စတုတ္ထတန်း ယောကျာ်းလေး ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ စာဖတ်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ကလေးအားလုံး စာကောင်းကောင်းဖတ်စာ သေချာစေဖို့ ဘယ်လိုမျိုး စာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးပေးသင့်ပါသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ စာဖတ်ခြင်း သင်ကြားပုံကို ပြန်လည်သုံးသတ်မိစေတဲ့ ဒီဟောပြောချက်မှာ ပညာသင်ကြားပေးသူနဲ့ စာရေးဆရာ Alvin Irby ကနေပြီး လူမည်းကလေးတွေ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ စာဖတ်ခြင်း စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရှင်းပြထားပြီး ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းအရ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာသင်ကြားပေးသူတွေဟာ ကလေးအားလုံးကို စာဖတ်သူတွေအဖြစ် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာမှာ ကူညီဖို့ လုပ်ပုံကို ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြထားပါတယ်။
Marc Bamuthi Joseph: ဘောလုံးက ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ကြားပေးတဲ့ လွတ်လပ်မှုအကြောင်း
2017-08-27 928,754 views
"ဘောလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အတူတကွပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရာပါ" လို့ ပြဇာတ် ဖန်တီးသူနဲ့ TED ဝိုင်းတော်သား Marc Bamuthi Joseph ကဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့ "ရွေးလျားခြင်းနဲ့ ကမ်းပေးခြင်း" (Moving and Passing) လို့ခေါ်တဲ့ ဆက်စပ်လှုပ်ရှားလည်ပတ်ခြင်း ပဏမခြေလှမ်းကနေ အနုပညာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ အားကစားအကြားမှာရှိတဲ့ နားလည်ရလွယ်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေကို လှစ်ဟပြဖို့ Joseph ဟာ ဂီတ၊ အကနဲ့ ဘောလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်ပါတယ်။ ရပ်ရွာကို အားပေးမြှင့်တင်ဖို့နဲ့ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေ ကြုံကြရတဲ့ ပြဿနာရပ်တွေကို မီးမောင်းထိုးပြဖို့ လှပတဲ့ ကစားပွဲကို သူဘယ်လိုများ အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာ လေ့လာလိုက်ပါဦး။
2017-12-11 1,577,795 views
Ibeyi: Valé" / "River" တောင်ကြားနဲ့ မြစ် ။
2017-09-20 90,206 views
Yoruba ယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာနဲ့ ပြင်းရှတဲ့ ခေတ်ပေါ် တေးသီဖွဲ့မှု ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အီလက်ထရို နှစ်ယောက်တွဲ (အမွှာညီအမများ) Ibeyi ကနေပြီး Valé" နဲ့ "River." ဆိုတဲ့ အကူးအပြောင်းလုပ်ထားတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်တွဲ တစ်စုံကို တီးခတ်ထားပါတယ်။
Jason Shen: အလုပ်တစ်ခု ရှာနေတာလား။ ဦးစားပေးဖော်ပြရမှာက သင့်အတွေ့အကြုံမဟုတ်ပဲ၊ သင်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကိုပါ။
2017-11-28 2,060,465 views
ကျွန်တော်တို့ မဆိုစလောက်ပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရင်က အတွေ့အကြုံ (သို့) ကောလိပ်မှာ သင်ကြားခဲ့တာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် အကျုံးဝင်တဲ့ အလုပ်တွေကို ထမ်းဆောင်ကြပါတယ်။ TED Resident Jason Shen ကိုကြည့်လိုက်ပါ၊ သူဟာ ဇီဝဗေဒကို လေ့လာခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ထုတ်လုပ်ရေး မန်နေဂျာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသွက်လက်ပြီး ထိုးထွင်းအမြင်ရှိတဲ့ လူသားစွမ်းရည်အကြောင်း ဟောပြောချက်မှာ Shen ကနေပြီး အလုပ်ရှာနေသူတွေ ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိဖို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့လုပ်နိုင်ပုံအကြောင်း တွေးခေါ်ခြင်းအသစ်တစ်ချို့နဲ့ ဘာကြောင့် အလုပ်ရှင်တွေဟာ သက်သေခံအထောက်အထားတွေထက် ကျွမ်းကျင်မှုကို ကြည့်သင့်တယ်ဆိုတာကို မျှဝေထားပါတယ်။
Walé Oyéjidé: အာဖရိကန် စွမ်းအားနှင့် စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့ ဖက်ရှင်။
2017-08-27 872,528 views
"အာဖရိကန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက ယဉ်ကျေမှုကနေ စေ့ဆော်ပြီး အနာဂတ်အတွက် ရာသက်ပန် မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပြည်ဝဖို့ပါ"လို့ ဒီဇိုင်းပညာရှင်နဲ့ TED ဝိုင်းတော်သား Walé Oyéjidé က ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Ikiré Jones တံဆိပ် (၎င်းတို့ရဲ့ လက်ရာကို Marvel ရဲ့ "Black Panther" မှာ မြင်ကြရမှာပါ) နဲ့အတူ မကြာခဏဆိုသလို ဝိုင်းပယ်တာခံနေရတဲ့ အုပ်စုတွေရဲ့ ခမ်းနားမှုနဲ့ ကျက်သရေရှိမှုကို ပြသဖို့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ပြောပြတဲ့ လှပစွာ ဖြတ်ညှပ်ထားတဲ့ အထည်မှာ အကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်းတွေကို သူ အသုံးပြုပါတယ်။
Guy Winch: ကြေကွဲတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ပုံ။
2017-04-24 6,139,550 views
ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေရဲ့ တစ်ချိန်မှာတော့ လူတိုင်းအားလုံး နီးပါးဟာ အသည်းခွဲခံရပါလိမ့်မယ်။ ဒီထူးခြားလှတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်မှုကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်ရင် ခြားနားလှတဲ့ အကြောင်းအရာ ဘယ်လိုများဖြစ်လိမ့်မလဲလို့ စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။ စိတ်ပညာရှင်ကနေပြီး အသည်းကွဲတာကနေ ပြန်လည်သက်သာခြင်းဟာ စံထားဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်တုံ့ပြန်မှုတွေကို တိုက်ခိုက်ခြင်းကနေစတင်ပုံနဲ့ အဲဒီမှာမရှိတဲ့ အဖြေတွေကို ရှာဖွေပုံကို ဖော်ပြထားပါပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်လို ရှေ့ဆက်ပုံအကြောင်း ကိရိယာတစ်စုံကို ပေးကမ်းထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ကွဲကောင်းကွဲကြလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့ လိုက်ပြီး ကွဲကြေဖို့ မလိုပါဘူးလေ။
Tito Deler: ကျွန်တော့ရဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ ဆုလာဘ်။
2017-11-14 202,847 views
ဘလူးစ် ဂီတပညာရှင် Tito Deler ဟာ သူ့ရဲ့ New York ​မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ အသံတွေကို စစ်ကြိုခေတ် Mississippi Delta ဘလူစ်းဂီတဟန်နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်ပါတယ်။ သူဟာ စင်ပေါ်
တက်ပြီး သူ့ရဲ့ သီချင်း "My Fine Reward." (ကျွန်တော့ရဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ ဆုလာဘ်)ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ တင်ဆက်မှုကို သီဆိုတီးခတ်ပါတယ်။
Su Kahumbu: ဆာလောင်နေသော ကလေးငယ်များကို အကူအညီပေးနိုင်ပုံ၊ တစ်ကြိမ်မှာ စာတစ်စောင်။
2017-08-27 962,018 views
Su Kahumbu ဟာ ဒူပေနာပေခံတဲ့ နွားမတွေကို မွေးမြူပါတယ်၊ ကျန်းမာပြီး ဝဝလင်လင် ကျွေးထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေပါ၊ ၎င်းတို့ရဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်ဟာ အာဖရိကမှာက တိုးလာနေတဲ့ အကျပ်အတည်းတစ်ခုကို ဖြေရှင်းဖို့ အဓိကကျပါတယ်။ ကလေးဘဝ အဟာရဆိုင်ရာ ကြုံလှီမှုပါ။ အသေးစား မွေးမြူရေး လယ်သမားတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့ သူမ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ရိုးရိုး SMS ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ iCow နှင့်အတူ TED ဝိုင်းတော်သားဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေကို စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ မွေးမြူခြင်းအကြောင်း အကြံပေးချက်တွေကို စာတိုတွေပို့ရင်း တိုက်တစ်လွှားမှာရှိတဲ့ လယ်သမားတွေကို ကူညီနေပါတယ်။ ဒီစျေးသက်သာလှတဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဟာ တစ်ကြိမ်ကို စာတစ်စောင်ပို့ခြင်းအားဖြင့် ဆာလောင်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ကျွေးမွေးဖို့ ကူညီနေပုံအကြောင်းကို ထပ်ပြီး လေ့လာလိုက်ပါဦး။
Michelle Knox: ကျန်းမာနေတုန်း သေခြင်းတရားအကြောင်းပြောပါ။
2017-12-11 1,251,078 views
သင်သေတဲ့အခါ ဖြစ်ချင်တာကို သင်သိလား။ သင့်ကို ဘယ်လို အမှတ်ရစေချင်လဲဆိုတာ သင်သိလား။ ကျွန်ုပ်တို့အများစု မဆွေးနွေးလိုလှတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပွင့်လင်းပြီး အူလှိုက်သည်းလှိုက်ဖြစ်ရတဲ့ ဟောပြောချက်တစ်ခုထဲမှာ Michelle Knox ကနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ဦးချင်းဆီကို ကျွန်ုပ်တို့တွေရဲ့ သေခြင်းတရား တစ်ဝိုက်က အဓိက တန်ဖိုးထားမှုတွေကို အလေးအနက်ဆင်ခြင်ကာ ဒါတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ချစ်ရသူတွေနဲ့ မျှဝေခိုင်းထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမွေအနှစ်တွေကို ဂုဏ်ပြုဖို့ မကြောက်ရွံပဲ အသိအမြင်များတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်စေဖို့ပါ။ Knox ပြောတာက "အခု သေခြင်းတရားအကြောင်း ပြောဆိုကြမယ်ဆိုရင် ဘဝဟာ အများကြီး ပိုလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်၊ ဒီအကြောင်းရပ်တွေကို သန်စွမ်းတုန်း၊ ကျန်းမာတုန်းမှာ ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်၊ ဒီနောက်မှာမှ အရေးကြီးတာက ဘာဆိုတာတင်မက၊ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပါ သင်ယူနိုင်ပါတယ်"တဲ့။
Mike Gil: ငါးများရဲ့ စုဝေး နေထိုင်မှုဟာ သန္တာကျောက်တန်းတွေကို ကယ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးနိုင်လား။
2017-08-27 972,717 views
Mike Gil ဟာ ဆန်းသစ်တဲ့ ကင်မရာမျိုးစုံစနစ်တွေနဲ့ ကွန်ပြူတာ မြင်ကွင်း နည်းပညာကိုသုံးပြီး ငါးတွေကို စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ TED ဝိုင်းတော်သားနဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဟာ သန္တာကျောက်တန်း ငါးတွေ ပြုမူပုံ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပုံနဲ့ ဂေဟစနစ်တွေကို သက်ရောက်မှုရှိပုံတွေကို စူးစမ်းလေ့လာပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော မျိုးစိတ်တွေရဲ့ ငါးတွေ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ကွန်ရက်တွေကနေ ဆက်သွယ်ပုံအကြောင်းနဲ့ ဒီကွန်ရက်တွေကို အလျင်ပြတ်စေခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ သန်းပေါင်းများစွာကို ကျွေးမွေးပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးကို ပံ့ပိုးပေးရာမှာကူညီတဲ့ နုနယ်လှတဲ့ ကျောက်တန်းတွေရဲ့ ဂေဟဗေဒအတွက် ဘယ်အဓိပ္ပါယ်ဆောင်နိုင်တာကို ပိုပြီးလေ့လာလိုက်ပါဦး။
Edsel Salvana: HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ အန္တရာယ်များသော ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။
2017-08-27 1,297,823 views
HIV ပိုးကို နှိမ်နင်းတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ နိုင်နေပြီလို့ ထင်နေလား? မနိုင်လောက်သေးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောက်ထပ် ဆေးဝါးဒဏ်ခံနိုင်တဲ့၊ HIV ပိုးကိုကုသတဲ့ဆေးကို ယဉ်ပါးလာတဲ့ ဗိုင်းရပ်တွေ ပေါ်လာတာကြောင့်ပါ။ ဒီ အသိဉာဏ်ဖွင့်ပေးတဲ့ ဟောပြောချက်ထဲမှာ TED ဝိုင်းတော်သား Edsel Salvana ကနေပြီး လောလောဆယ် သူ့ရဲ့ နေထိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ထကြွနေတဲ့ HIV အမျိုးအစားခွဲ-AE အကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြပြီး၊ ၄င်း HIV-မျိုးခွဲ-AE ကြောင့် ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းမှာ "HIV ကပ်ရောဂါတစ်ခု" အလွယ်တကူ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်ုပ်တို့ကို သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
Marily Oppezzo: ပိုပြီး ဆန်းသစ်ဖန်တီးချင်လား၊ လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ပါ။
2017-04-23 3,302,872 views
စိတ်ကူးသစ်တစ်ခုပေါ်လာဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာ အကျပ်ရိုက်နေတဲ့ အချိန်တွေရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာနဲ့ သင်ကြားရေး သိပ္ပံပညာရှင် Marily Oppezzo ရဲ့ သုတေသနအရတော့ ထပြီးတော့ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ဆန်းသစ်ဖန်တီးတဲ့ အရည်တွေ စီးဆင်းဖို့ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်လောက်ပါတယ်။ ဒီပျော်စရာ သွက်လက်တဲ့ ဟောပြောချက်မှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းဟာ သင်ရဲ့ နောက်လာမဲ့ ဦးနှောက်မုန်တိုင်းဆင်မှုကနေ အများဆုံးရရှိဖို့ သင့်ကို ကူညီပေးပုံကို သူမက ရှင်းလင်းပြထားပါတယ်။
Vivek Maru: ဥပဒေရဲ့ အာဏာစက်ကို လူတွေရဲ့လက်ထဲကို အပ်နှင်းပုံ။
2017-08-27 1,133,161 views
တရားဥပဒေရဲ့ ဘီးတွေဟာ လည်ပတ်သင့်သလောက် အမြန် မလည်ပတ်တဲ့အခါ သင်ဘာလုပ်နိုင်လဲ။ ဒါမှမဟုတ် လုံးလုံးကို မလည်ပတ်ဘူးဆိုရင်ရော။ Vivek Maru ဟာ လူတွေနဲ့ ဥပဒေကြားက ဆက်စပ်မှုကို ပြောင်းလဲဖို့၊ ဥပဒေကို စိတ်ကူးစိတ်သန်းသက်သက် (သို့) ခြိမ်းခြောက်မှုကနေပြီး လူတိုင်း နားလည်နိုင်၊ အသုံးပြုနိုင်၊ ပုံဖော်နိုင်တဲ့ တစ်ခုခုအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေကိုချည်း အားကိုးနေမယ့်အစား Maru ကနေပြီး သူတို့ကိုယ်ပိုင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပြီး ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ လူတွေကို အထောက်အကူရစေတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ စကားရပ်တွေအဖြစ် ဥပဒေကို ပိုင်းခြာစိတ်ဖြာပေးသူ ရပ်ရွာမှာရှိတဲ့ အကူ (သို့) အလွတ် ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေရဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်တစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပဒေကို အသုံးချခြင်းရဲ့ ဒီဆန်းသစ်တဲ့ နည်းလမ်းဟာ လူမှုရေးအရ ဖယ်ကြဉ်တာခံရတဲ့ လူတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ တောင်းဆိုရာမှာ ဘယ်လို အကူညီပေးနေပုံကို ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါဦး။ "အနည်းငယ်မျှသော ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းဟာ အများကြီး တာသွားနိုင်ပါတယ်"လို့ Maru က ဆိုထားပါတယ်။
Rébecca Kleinberger: ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ့်အသံကို မကြိုက်ကြတာ ဘာ​ကြောင့်လဲ
ကိုယ့်အသံဟာ ကိုယ့်ကို အခြားသူတွေ သိမြင်ကြပုံနဲ့ ခွဲခြား မရနိုင်တဲ့ အရာမှန်ပေမဲ့၊ ကိုယ်ရဲ့ အသံဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထင်မြင်ကြပုံထဲမယ် မသိရသေးတာ မရှင်းလင်းတာတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ Rébecca Kleinberger က ကျွန်ုပ်တို့က ကိုယ့်အသံကို အသုံးချကြပုံနဲ့ နားလည်ကြပုံကို လေ့လာ စူးစမ်းနေသူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အသံသွင်းထားတဲ့ ကိုယ့်အသံကို ဘာဖြစ်လို့ မကြိုက်ကြတာလဲ ဆိုတာကို သူက ရှင်းပြထားပြီး ကိုယ်ရဲ့ ထွက်သံ၊ ဝင်သံနဲ့ အတွင်းသံတွေ အကြားက ခြားနားချက်တွေကို ခွဲခြားဖေါ်ပြထားရုံသာမက ကိုယ်က မသိပါလျက်နဲ့ ထူးဆန်းစွာ ဆက်သွယ် စကားပြောဆိုနိုင်ပုံကို ဖွင့်ထုတ် ပြသထားပါတယ်။
Miho Janvier: နေရောင်ခြည် မုန်တိုင်းကို လိုက်သူတစ်ဦးထံမှ သင်ခန်းစာများ။
အာကာသ ရူပဗေဒပညာရှင် Miho Janvier ဟာ နေရောင်ခြည် မုန်တိုင်းတွေကို လေ့လာပါတယ်၊ နေကနေ လွတ်ထွက်ပြီး ကမ္ဘာမြေပေါ်က သက်ရှိတွေကို နှောင့်ယှက်နိုင်တဲ့ ဒြပ်မှုန်များရဲ့ တိမ်တိုက်ကြီးတွေပါ၊ (၎င်းတို့ဟာ အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရောင်စဉ်တန်းတွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပေးနေပါသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့)။ အပူချိန် ကယ်ဗင် ၁၀ သန်းလောက်အထိကို လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ နေပေါ်မှာရှိတဲ့ လေထုလွှာကို ဘယ်လို သင်လေ့လာလဲ။ သချာနဲ့လား။ TED ဝိုင်းတော်သားကနေပြီး နေက ကမ္ဘာမြေပေါ်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘယ်ပုံ သက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကို ပိုမိုနားလည်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ သူမရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မျှဝေခိုက်မှာ ပါဝင်လိုက်ပါ။
Luvvie Ajayi: သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်မှုကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် လုပ်ယူပါ။
Luvvie Ajayi ဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမှာ (သို့) လူစုတစ်စုထဲမှာ အများနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြောရမှာ မကြောက်ပါဘူး၊ သင်တို့လည်း မကြောက်သင့်ဘူးလေ။ "သင်တိတ်ဆိတ်မှုက ဘယ်သူ့ကိုမှ အကျိုးမပြုဘူး" စာရေးဆရာမ၊ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲရေးဝါဒီနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပြဿနာရှာတတ်သူလို့ မိမိကိုယ်ကို ကြေညာထုတ်ဖော်တဲ့သူက ဆိုပါတယ်။ ဒီထက်မြက်ပြီး စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးတဲ့ ဟောပြောချက်ထဲမှာ Ajayi ကနေပြီး သင်ဟာ ဖွင့်ဟပြောဆိုဖို့ (သို့) နှုတ်ဆိတ်ဖို့ အစွန်းမှာ ယိုင်တိယိုင်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် မိမိကိုယ်ကိုမေးဖို့ မေးခွန်းသုံးခုကို မျှဝေထားပါတယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်မှုကို နည်းနည်းလေးပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာစွာ နေကြဖို့ အားပေးထားပါတယ်။
Mariano Sigman and Dan Ariely: အစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေရအောင် ဘယ်လို လုပ်နိုင်သလဲ။
အားလုံးသိပြီး ဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်း အစုအဝေးနဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါ အမြဲတမ်း မမှန်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ မှားတောင် မှားနိုင်ပါသေးတယ်။ အုပ်စုလိုက် ဆုံးဖြတ်ချက် ကောင်းကောင်းရနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ Mariano Sigman နဲ့ သူ့ရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် Dan Arielyတို့ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြုလုပ်နိုင်ထို့ ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာအနှံ့ စမ်းသပ်မှုလေးတွေ ပြုလုပ်လျှက် ရှိပါတယ်။ အခုဒီမှာဖေါ်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပြည့်နေတဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ရှင်းလင်းပြောဆိုချက်ထဲမှာ သူတွေ့ရှိထားတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရလဒ်တွေနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ်တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ Sigman က တချိန်မှာ လူတွေဟာ ပိုပြီးတူညီတဲ့ ဦးတည်ချက်ရှိလာတဲ့အခါ အုပ်စုတွေအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းကြတယ် ဆိုတာပိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းအသစ်တွေကို မြင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Dan Gartenberg: အိပ်မောကျခြင်းမှ ဦးနှောက်အတွက်ရရှိလာသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ၎င်းမှ အကျိုးများများရအောင်လုပ်နည်း။
နှစ်ချိုက်သော အိပ်စက်ခြင်းနဲ့တူတာ မရှိပါ။ ဒီကနေ အကျိုးကျေးဇူးများများရအောင် နည်းပညာက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ရော။ Dan Gartenberg ဟာ အိပ်မောကျခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ နည်းပညာကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်တွေကို စုစည်းပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်တွေကို ဖွဲ့စည်းဖို့ ကူညီပေးနိုင်လောက်တဲ့ (အခြားအခြားသော အံ့ဖွယ်အရာတွေကြားက) အားအင်ပြည်လည်ပြည့်ဖြိုးစေမှုအဖြစ်ဆုံး အဆင့်ပါ။ ပိုပြီးအိပ်မောကျတာဖြစ်စေတဲ့ ဒီအဆင့်အတွင်းမှာ ဦးနှောက်လှိုင်းတွေကို ထင်ဟပ်တဲ့ အသံများကို ဖွင့်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ မှတ်ဉာဏ်နဲ့ သင်ယူနိုင်စွမ်းအပေါ် ၎င်းရဲ့ အလားအလာရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပိုမို ရှာဖွေလိုက်ပါဦး။
Matilda Ho: တရုတ်ပြည်က အစားအစာကောင်းရဲ့ အနာဂတ်။
တရုတ်ပြည်မှာ ဓာတုဗေဒနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးကင်းတဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ အစားအစာတွေဖို့က ခက်ခဲပါတယ်။ ၂၀၁၆ တွင် တရုတ်အစိုးရက ကိုးလအတွင်းမှာ သန်းဝက်ရှိတဲ့ အစားအစာ ဘေးကင်းရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဖွင့်ချခဲ့ပါတယ်။ ဘေးကင်းပြီး ရေရှည်ခံတဲ့ အစားအစာ ရင်းမြစ်တွေ ကင်းမဲ့မှုမှာ TED ဝိုင်းတော်သား Matilda Ho ကနေ အစာထဲမှာပါတဲ့ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတုဆေး၊ ပဋိဇီဝဆေးနဲ့ ဟိုမုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံးဝ သည်းခံမှုမရှိတဲ့ စမ်းသပ်မှုကို ပြဌာန်းရင်း တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အွန်လိုင်း လယ်သမား စျေးကွက်ကို အစပျိုးခဲ့ပါတယ်။ သူမကနေပြီး သူမရဲ့ တိုးပွားကာလာနေတဲ့ လမ်းစဉ် ဘယ်လို စတင်လာပုံနဲ့ သဘာဝအတိုင်း စိုက်ပျိုးထားတဲ့ အစားအစာကို ဒါကို လိုအပ်တဲ့ မိသားစုတွေဆီ ဆောင်ကြဉ်းပေးခြင်းကို မျှဝေထားပါတယ်။
Niti Bhan: တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ စီးပွားရေးရဲ့ ပုန်းကွယ်နေသော အခွင့်အလမ်းများ။
Niti Bhan ဟာ အာဖရိကရဲ့ တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ စျေးတွေအတွက် စီးပွားရေး နည်းဗျူဟာကို လေ့လာပါတယ်၊ စျေးဆိုင်ငယ်လေးတွေ၊ ဆိုင်ခန်းတွေ၊ တိုက်ကြီးရဲ့ စီးပွားရေးကို ဆက်လက် လည်ပတ်စေတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အင်ဂျင်တွေဖြစ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ လက်မှုပညာသည်တွေနဲ့ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေပါ။ ဒီအလုပ်သမားတွေကို အခွန်ရှောင်သူတွေ၊ ရာဇဝတ်သာတွေလို့တောင် တွေးမိချင်စိတ်ပေါက်ပေမဲ့ စီးပွားရေးရဲ့ တိုးပွားနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဟာ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး ရင်နှီးမြုပ်နှံထိုက်တယ်ဆိုတာကို သူမက တင်ပြထားပါတယ်။ ဒါကိုသာလုပ်ရင် ထောင်ချီတဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ ပိုမိုဖန်တီးနိုင်လောက်တယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်။ Bhan ပြောတာက "ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းနဲ့ စတင်နိုင်မလား"တဲ့။
Kayla Briët: အနုပညာကို ဘာကြောင့် ဖန်တီးတာလဲ။ ကျွန်မရဲ့ အမွေအနှစ်အတွက် အနာဂတ်မှာ ဖော်ကြည့်ဖို့ အချိန် ကြုတ်တွေ တည်ဆောက်ဖို့ပါ။
Kayla Briët ဟာ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့ မိမိကိုယ်ကို ရှာဖွေမှုကို စူးစမ်းတဲ့ အနုပညာကို ဖန်တီးတာ ဖြစ်သလို...သူမရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာ တစ်နေ့နေ့မှာ မေ့လျော့ခံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်ကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ သူမကနေပြီး သူမရဲ့ ဖန်တီးတတ်တဲ့ သဘောထားကို ရှာတွေ့ပုံကို မျှဝေထားပြီး သူမရဲ့ ဒတ်ချ်‘အင်ဒိုနီးရှန်း၊ တရုတ်နဲ့ ဌာနေရင်း အမေရိကန် အမွေအနှစ်ကို ရုပ်ရှင်နဲ့ ဂီတ အချိန်ကြုတ်တွေထဲမှာ သွတ်သွင်းရင်း ဆယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
Jon Bowers: ကျရှုံးမှာကို မကြောက်ဘဲ ပြီးပြည့်စုံမှုကို ရည်မှန်းချက်ထား လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်
2017-07-20 1,653,629 views
တစ်ခါတစ်လေမှာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားတာဟာ မလုံလောက်ပါဘူး။ အခြေအနေက တောင်းဆိုလာတဲ့အခါ ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ရတော့မှာပါ။ ကျွမ်းကျင်အဆင့် ပစ္စည်းပို့ယာဉ်မောင်းသူတွေအတွက် သင်တန်းဖွင့်ထားတဲ့ ဂျွန်ဘိုဝါစ်အတွက်ကတော့ ပေးဆပ်ရမယ့်အရာက ကြီးမားလွန်းပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တစ်နေ့ကို လူအယောက် ၁၀၀ သေဆုံးကြရပါတယ်။ သူရရှိဖို့ မျှော်လင့်ထားတာက ပြီးပြည့်စုံမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ် "မှန်ကန်တဲ့ အရာကို ရရှိဖို့ ခက်ခဲတဲ့အရာကို လုပ်ဆောင်လိုစိတ်" ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ လုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာ ပြီးပြည့်စုံလာစေဖို့ ကျရှုံးမှုပင်ဖြစ်စေ တူညီတဲ့ လုံ့လဝီရိယာ ထားရှိသင့်ကြောင်းကို သူက ရှင်းလင်းပြောပြထားပါတယ်။
Lauren Sallan: ဆင့်ကဲ့ဖြစ်စဉ်ကို အောင်နိုင်ပြီး အစုလိုက် မျိုးသုဉ်းမှုမှာ ရှင်ကျန်နည်း။
2017-04-24 1,135,669 views
ဆင့်ကဲ့ဖြစ်စဉ်ကို အောင်နိုင်ပြီး အစုလိုက် မျိုးသုဉ်းမှုမှာ ရှင်ကျန်နည်း။ Lauren Sallan ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အသက်ရှင်လျက်ရှိနေခြင်းအားဖြင့် သင်တို့ဟာ သမိုင်းရဲ့ အောင်နိုင်သူတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ၊ နှစ်ပေါင်း ဘီလံယံ လေးသန်း ဖန်တီးနေတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ အထွတ်အထိပ်တစ်ခုပါ။ နေထိုင်ခဲ့ပြီး အခြားသော မျိုးစိတ် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာ သေသွားပါတယ်.... မီး၊ ရေကြီးတာ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွားတွေ၊ ရေခဲ၊ သဘာဝ ရွေးချယ်မှုရဲ့ အပူနဲ့ အအေး သင်္ချာကြောင့်ပါ။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဒီလောက် ကံကောင်းခဲ့တာလဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်ပြီး နိုင်ဦးမှာလား။ ဒီတိုတောင်းပြီး ရယ်စရာကောင်းတဲ့ ဟောပြောချက်ထဲမှာ ကျောက်ခေတ်ဦးဇီဝဗေဒ ပညာရှင် နဲ့ TED ဝိုင်းတော်သား Lauren Sallan ကနေပြီး ယနေ့ခေတ် သင်တို့ကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ အစုလိုက် မျိုးသုဉ်းမှုကနေ သင်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေးတွေရဲ့ ဆက်လက်ရှင်ကျန်ပုံအကြောင်း ထိုးထွင်းအမြင်တွေကို မျှဝေထားပါတယ်။
Giulia Enders: ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အူမဆိုင်ရာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ သိကောင်းစရာများ
2017-05-04 2,379,951 views
ကျွန်ုပ်တို့ အီးပါးတဲ့ အကြောင်းကို စဉ်းစားခဲ့ဘူးပါသလား။ အူမအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာပါ ဖြစ်တဲ့ Giulia Enders ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးအား အစာခြေမှု စနစ်ကို၊ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ အဲဒီစနစ်ကြီးထဲကို ခေါ်ဆောင်သွားလျက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်နွှယ်မှု အပါအဝင်၊ နောက်ခံ အကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းလင်း တင်ပြထားပါတာယ်။ ကျွန်ုပ်တို့က ရှက်ရွံ့ကြတဲ့ အရာတချို့ကို နီးပ်ကစွာ လေ့လာမှုက ကျွန်ုပ်တို့အား ကြောက်စိတ်တွေ ကင်းမဲ့လာစေပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုပြီးတန်ဖိုးထား တတ်ကြရန် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ကြောင်း ဟောပြောချက်ပါ။